यस्तो रहेछ संसारभरि भाइरल यो तस्वीरको रहस्य - Everest Dainik - News from Nepal
यस्तो रहेछ संसारभरि भाइरल यो तस्वीरको रहस्य
काठमाडौं । यतिखेर तस्वीरमा देखिएकी बालिकाको तस्वीर संसाभरी भाइरल बनेको छ । यो तस्वीरमा बालिकाको खुट्टा देखेर जो कोही पनि चकित हुने गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ केहीले भने उनको हातमा पपकर्नको प्याकेट भएको बताइरहेका छन् । यो तस्वीरलाई नियालेर हेर्नुस् त ?
झुक्याउन खोजेको त उनको हातमा भएको पपकर्नले पो रहेछ । ल राम्ररी हेर्नुस् । पपकर्नको प्याकेटको कलर र उनी उभिएको मैदानको कलर उस्तै छैन त ?
यही समान कलरका कारण यो तस्वीरले मज्जैले झुक्याउने रहेछ । कतिपयले यसलाई अप्टिकल इल्यूजन या दृष्टिभ्रम भन्ने गरेका छन् ।
वास्तवमा यी बालिकाको शरीरको तल्लो भागलाई पपकर्नले केही ढाकेको छ । अब पपकर्नको कलर पछाडि मैदानको कलरसँग मेल खाने भएका कारण उनका खुट्टा पातला देखिएका छन् । तपाई पछाडिको ब्याकग्राउण्ड को कलर अर्को भएको भए यो पपकर्नको प्याकेटले उनको घुँडामाथिको भाग केही छोपेको स्पष्ट चाल पाउन सक्नुहुन्थ्यो होला ।
यो तस्वीरमा कैयन कमेन्टहरु आएको पाइन्छ । अधिकांशले यति दुब्ली भनेर भनेका छन् । तर यी बालिकाका खुट्टा दुब्ला होइनन । मात्र रंगहरुको संयोजनले सिर्जना गरेको दृष्टिभ्रम मात्रै हो ।
ट्याग्स: optical illusion, Viral girl